Futuro Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Futuro Forex Tusiyaha
Futuro Forex Tusiyaha
Futuro Forex Tusiyaha wuxuu ku salaysan yahay xiriir ah. Waxaa la qorsheeyay in la odoroso tallaabada qiimaha mustaqbalka ee ku saabsan taariikhda ee la soo dhaafay oo ka mid ah lammaane lacagta xiran. Waxaa loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan qaab dhismeedka waqti kasta laga bilaabo ugu yaraan ka taas oo 5min ugu badnaan in madal ku siin karaan.
tilmaame ayaa si fudud u dhaqmo by xiriir u dhexeeya tirooyinka a qaar ka mid ah baararka on shaxda la soo dhaafay tiro ee la soo dhaafay of baararka samaynta isku xigxiga kuwaas oo dhererkeedu wuxuu la siman yahay tirada gudban in la isticmaalo in xiriir ah. Natiijada xiriir tani waa tiro ka mid ah in inta u dhaxaysa - 100 iyo 100. The - 100 xiriir ka-bedelka ugu badan halka 100 xiriir wanaagsan ee ugu weyn.
The Futuro Forex Tusiyaha ayaa lagu wadaa in lagu cabbiro kaliya xiriir wanaagsan by default. Si kastaba ha ahaatee aad, ganacsade ah mar walba u qotomiyey karaa hab in ay cabbiri kartaa labadaba negative iyo edbinta wanaagsan haddii ay sidaas rabto.
lagugu tuday sawirka.1. Futuro FX Tusiyaha sharaxay.
tilmaame soo bandhigayaa qaar ka mid ah warbixin ku saabsan geeska top ka tagay in la dhigayaa in a box qoraalka buluugga ah. Tani macluumaad waa waxaa hoos loo qabanqaabiyaa. Laga soo bilaabo sare ee, waxaa jira magaca tilmaame "v2.00 FuturoFX" ah, ka dibna waxaa jira a link in website a ka dibna mar furan ee hadda taas oo ah markii ugu bar la soo dhaafay oo la soo bandhigay shaxda la furay. Oo halkaasaannu ka tagno oo xaddiga shumac in la falanqeeyay oo la saaro max_history la dhigay. soo socda waxaa tirada xiriir la sameeyaa (tirada OHB taariikhda falanqeeyay) iyo dhererka block kasta taariikhda u dhaxaysa qaansada ku square. Macluumaadka soo socda waa tirada xiriirk ka kulan in uu yahay kor marinka taasoo by default ayaa lagu wadaa at 75.0% tilmaame ayaa sidoo kale siinayaa xiriir ugu fiican ee laga helay. The Liiska Forbes iman kara tuseyso tirada faa'iido eego Liiska Forbes in ganacsade ah ayaa lagu wadaa in marka uu isagu ama iyadu ka furmay iibiyay ama meel dheer. tilmaame ayaa sidoo kale ka hor tagaa oo wuxuu ku siinayaa ganacsade score ee heerka kalsoonida ee xisaabinta xiriir ah. Tani waxay ka caawisaa ganacsade inuu go'aansado inuu ka ganacsan ama ma.
Sida loo dhigo si isticmaalaya Futuro Forex Tusiyaha.
First, ee ka ganacsada oo dhan waxay leeyihiin in ay maanka qaar ka mid ah qoraalada muhiim ah oo ku saabsan marka in meel amar la isticmaalayo Tilmaame this. Qoraalka waxaa ka mid ah:
– ganacsade waa in la furo ganacsi kasta oo keliya marka heerka kalsoonida kor ku xusan yahay 50%.
– Haddii iman kara (Liiska Forbes) muujinaysaa in muddo dheer waa loo siman yahay si gaaban ama dheer iyo gaaban ku leeyihiin kala duwan ee ka yar 10 Liiska Forbes, ganacsade ah waa inay iska ilaaliyaan ganacsiga.
– kulan ee xiriir ah waa in sidoo kale kor ku noqon 50% waayo, ganacsade ganacsiga.
amarada gelinayn Futuro Forex Tusiyaha: ganacsade ah waa in meel amar ku xiran kara (Liiska Forbes) in ka sareeyo. Taasi waa haddii tilmaame la saadaaliyo in waqti dheer ku siin doonaa faa'iido sare marka la eego Liiska Forbes badan jagooyinka gaaban ka dibna ganacsade ah waa in meel meel dheer iyo qeybsanaan ku xigeenka. Taas waxaa la samayn karaa adigoo amar jihada kaas oo qataarrada huruud (qiyaas fiican) loo sameeyay.
Marka Ganacsi ganacsade ah waa in mar walba meel joogsato. joogsato waxaa la gelinayaa sida soo socota: faa'iido ka qaaddid oo lagu meeleeyo ugu tirada Liiska Forbes muujiyay ah oo ku saabsan Liiska Forbes iman kara iyo khasaaro stop ee tirada Liiska Forbes ee ganacsiga ka soo horjeeda in la geeyo.
Fig.2. Futuro Forex Tusiyaha dhigaya si iibiyay isticmaalayo Tilmaame FuturoFX ah.
Futuro Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Futuro Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Futuro Forex Indicator.mq4?
Copy Futuro Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Tusiyaha Futuro Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Futuro Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousMACD Cross Forex Tusiyaha
Next articleWeeraryahan Liiska Forbes Forex Tusiyaha